🎟️ Ebe nkiri | Gaa na Hultsfred
Chọpụta ebe ọhụrụ
Kedu otu ị ga - esi achọpụta Hultsfred? Kedu ihe ị ga-echefu na ihe nlegharị anya enwere? Anyị achịkọtara ụfọdụ ndụmọdụ ga - enyere anyị aka n’ihe anyị nwere ike ime yana nke anyị nwere olile anya ga - enyere gị aka na njem nchọta gị!
🥾 Hụ & mee
🛍️ Ịzụ ahịa
Artist Malin Hjalmarsson
Mgbe ọtụtụ ndị gbasoro ụzọ ndụ, Malin kpebiri ịgbaso ụzọ nke ya ma ghọọ onye na-ese ihe. Ugbu a ọ na-arụrụ onwe ya ọrụ. N'okwu nke aka ya, ọ na-ede "Onye ọ bụla
Hultsfred - Na Na Na
Akụkọ nke Sweden kasị kpara music ememme! Akụkọ, foto na ihe nkiri vidiyo sitere na ebe a na-edebe egwu egwu Agbanwela ebe a na-edebe Rock Rock Swedish ugbu a ka ọ bụrụ ụzọ ije ije anụ ahụ n'ala ezumike mara mma n'akụkụ ọdọ mmiri ahụ.
Chọọchị Målilla-Gårdveda Na 1800, parish abụọ ahụ Målilla na Gårdveda hiwere parish jikọtara ọnụ. Nke a bụ mgbe ọbịbịa bishọp na 1768 mgbe ụka ụka Målilla na Gårdveda
Chọọchị Vena bụ otu n’ime nnukwu ụlọ ụka mba na diọcese nke Linköping. Toto ke ntọn̄ọ, ufọkabasi ama odụn̄ ekpere se ibede owo 1200. Mgbe mweghachi ole na ole gasịrị, ewepụrụ bench
Chọọchị Mörlunda dị ezigbo mma nke nwere akụkụ ogologo n'akụkụ Emådalen. Emechara ụka nke ugbu a na 1840, mana dịka 1329 enwere ike nwee ụka n'otu saịtị ahụ.
Hultsfred Churchka, obodo kacha n'ime ime obodo, nwere n'ezie ụka kacha nta. Atụmatụ iwu ụlọ ụka na Hultsfred adịwo kemgbe oge na 1921 e mere atụmatụ.
Ewubere ụlọ ụka Virserum n'ụdị neo-Gothic nwere njiri mara elu ya na windo nwere ọnụ ụzọ na ọnụ ụzọ. Ewubere ụlọ ụka Virserum dị ugbu a n'ime afọ 1879-1881. Nke mbụ
E wughachiri nri site n'ike mmụọ nsọ site na okike site na okike na osisi na oke ohia dị ka isiokwu ma kwadebe ya na mpaghara akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ọhụrụ, ọkụ nchekwa ọhụụ, ebe ọrụ dị mfe
Älọ ahịa ädị Designdị ädị
Ụlọ ahịa ahụ dị na mpaghara Ụlọ ọrụ. Ngwaahịa mpaghara na mpaghara. Nka, nka, udi na imewe. A ga-ahụ osisi, textiles, ceramik, ajị anụ, iko na ọtụtụ ihe ndị ọzọ
Omlọ ahụ dị n'akụkụ ebe a na-adọba ụgbọala na mpaghara ahụ. Ọ bụ otu n'ime Sweden kasị ukwuu looms. Ulo elu na Virserum adịla afọ 23. Na ala abụọ dị
N'ime mpaghara ụlọ ọrụ ahụ, enwere ahịhịa ahịhịa mara mma nke nwere ahịhịa dị iche iche 150, okooko osisi ọkọchị na perennials.
Ogige ahụ dị na Hultsfred dị na mmụọ egwu, ebe ụmụ akwụkwọ si Lindblomskolan sere eserese dị ka aro maka ihe ha chọrọ ka ọ dị. N'akụkụ ogige ahụ, enwere ogige ndị mara mma na ebe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ mara mma.
Lasse-Maja Cave ma ọ bụ Stora Lassa Kammare nwere akụkọ na-akpali akpali ịkọ. N'ime ọgba a, ndị mmadụ bi na obodo Klövdala chọrọ mgbaba n'aka Danes na 1612. Dabere na
Hagadalsparken enwetawo ezigbo mmụba n'ime afọ gara aga ma ugbu a ọ nwere ike ịnweta ma dị nchebe karịa ka ọ dị na mbụ. A ọdọ mmiri na wuru
Ezigbo ihe osise nka Geertjan Plooijer
Foto na usoro foto ochie Geertjan Plooijer ọkachamara foto / nka. O si n'ebe ugwu Friesland na Holland ma bi ma na-arụ ọrụ na Mörlunda. O nwere
'Slọ ọrụ Steve
N'obere ugwu, nke nwere echiche mara mma, n'ime obodo Tälleryd n'èzí Vena bụ ugbo Nybble. Na Lillstugan mara mma, imepụta ihe na-aga n'ụlọ ihe nkiri Steve Balk. Ha niile
Omenkà Lena Loiske
Amuru ya n’afọ 1950. Onye gụrụ akwụkwọ n’ihe gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Amalitere eserese n'ime afọ ole na ole biri na Tanzania (1995-1997). Agba tumadi na acrylic. Ihe niile si na odida obodo ka reindeer
Nweta mmetụta nke ịnya ụgbọ ala ụgbọ oloko oroma-acha odo odo na-eku ume 50s n'etiti Virserum na Åseda. Nwee obi ụtọ na gburugburu nostalgia ma nwee kọfị nwere ụdị asaa
Warara track Hultsfred-Västervik
The 7 km ogologo na 891 millimita n'obosara warara nlele Hultsfred-Västervik gbatịrị si ọhịa nke Småland n'ebe ọdịda anyanwụ, n'oge gara aga ọdọ mmiri, obere obodo na ọrụ ugbo ka.
Ogige akụkọ ihe mere eme nke Hultsfred
N’ogige mara mma nke dị n’akụkụ Ọdọ Mmiri Hulingen bụ ogige ntụrụndụ Hultsfred. N’aka nri dị n’akụkụ ogige bụ ogige folkets, ebe a na-egwu egwuregwu na kampu. Mgbe osụhọde n'Ọdọ Mmiri Hulingen na 1924 enwere
Ogige akụkọ ihe mere eme Obodo Målilla-Gårdveda
Målilla Gårdveda Hembygdspark är en av Sveriges största och mest aktiva hembygdsparker. Här pågår aktiviteter året runt och parken utökas ständigt med nya sevärdheter. I parken
Sweetlọ Na-atọ ultstọ
Ihe ngosi "Home Sweet Hultsfred" nke na-akọ akụkọ banyere otu Rockparty na Hultsfred Festival. Akụkọ dị na mgbidi! Enwere ike ịhụ ihe ngosi banyere Rockparty na Hultsfred Festival n'ime ụlọ Klubben na
Kungsbron, nke dị na Emån, bụ ebe a na-alụ agha na 1612 maka otu n'ime ọgụ mbụ Gustav II Adolf busoro ndị Denmark. Agha a na Kungsbron Na Kungsbron na Järeda
Chọọchị dị ugbu a nwere ike ịbụ nke atọ n'otu ebe ahụ. Mgbe mbụ e wuru ụka amaghị na e dere akwụkwọ na-kpam kpam na-efu. Na ụka
Dabere na akụkọ mgbe ochie, Nils Dacke merụrụ ahụ zoro na Dackegrottan pụọ na ndị agha Gustav Vasa. Nils Dacke duuru ndị ọrụ ugbo Småland n'oge ọgba aghara ahụ megide Gustav Vasa. Na
Nkume ncheta Oscar Hedström
Oscar Hedström bụ otu n’ime ndị bidoro ọgba tum tum India. Ọ bụ ya bụ onyeisi ndị injinia. Oscar Hedström wuru mbido nke mbu n’afọ 1901. Ọ dị mma dịka onye mmebe, nke
Ogige ntụrụndụ nke obodo Virserum
Virserums Hembygdspark bụ ogige ntụrụndụ nke ụlọ na Virserum na obodo Hultsfred, yana ụlọ 15, site na narị afọ nke 1600 ruo oge a. Buildingslọ ndị dị n'ógbè ahụ na-egosi ọnọdụ ahụ
Ebe nchekwa Alkärret
Ebe nchekwa Alkärret bụ otu n'ime gburugburu oke ọhịa anyị nwere ọtụtụ ụdị, ma bụrụ ewu ewu na frogs, salamanders na osisi ndị ọzọ dị na mmiri. N'ihi ezi ekwukwa n'akwụkwọ ọkọnọ na
Hagelsrums gbawara ọkụ
Kilomita ise n’ebe ugwu ọwụwa anyanwụ nke Målilla, na ọdịda nke Silverån bụ obodo Hagelsrum. Enwere foduru nke ọkụ ọkụ nke atọ na nke ikpeazụ nke Hagelsrum. Ewuru oku ọkụ ahụ na 1748. N'oge ahụ
I skogsmarkerna vid Björkmossa står ett träkors med inskriptionen ”Jag ligger och sover och är eij dö, Herre förlåt thenna synder som lade mig i